Igbo – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Otu ụzọ mgbawa dara n’obodo Beirut
N’August 4, 2020, ihe nchekwa ihe dị ka metric ton 2750 nke ammonium nitrate nke echekwara nke ọma n’ọdụ ụgbọ mmiri Beirut, Lebanon gbara ọkụ wee malite nnukwu mgbawa dị elu nke bibiri akụkụ buru ibu nke obodo ochie ahụ.
June 13, 2022 by admin Igbo 0
Taa, anyị na-ekwu maka mgbanwe, ihe ọhụrụ na nkuchi.
Mgbe igwe onyonyo agba pụtara na Italy n’afọ 1970, ndị ọchịchị obodo wepụrụ ọtụtụ TV na-ekwu na ha emebeghị ule zuru oke yana na ha nwere ike imebi ndị na-ekiri ya. Ma eleghị anya, ha ziri ezi, ikekwe ọ bụghị. Isi ihe bụ na ọ bụ teknụzụ na-akpaghasị ihe gọọmentị nwara ịhazi maka na ha aghọtaghị ya.
Ihe atụ ọzọ bụ ịntanetị.
May 26, 2022 by admin Igbo 0
Igwe Igwe Mmetụta Igwe Ọdụdọ – Igbo
Ihe ngosi nke induction electromagnetic. Iwu Faraday – Igbo
Ọ bụ Michael Faraday na Joseph Henry chọtara ihe dị na induction electromagnetic, Faraday bipụtara nsonaazụ nke nnwale mbụ nke na-akọwapụta ihe dị n’ime induction electromagnetic na 1931 site n’aka Faraday. Ihe omume nke induction electromagnetic mejupụtara n’ọdịdị nke voltaji eletrọnịkị na-ebute ya na ihe a na-eme ugbu a na sekit gafere site na oge ndọta na-agbanwe agbanwe. A na-egosipụta nnwale dị mfe nke na-egosipụta ihe ngosi ahụ na eserese 1. Anyị nwere eriri igwe na njedebe nke anyị jikọtara milliammeter na-eme sekit mechiri emechi. Anyị na-eweta magnet na gburugburu sekit a. Ọ bụrụ na ndọta nọ n’izu ike, ammeter anaghị egosi ugbu a ọ bụla. Ọ bụrụ na a na-atụgharị magnet azụ na azụ n’etiti eriri igwe na-atụgharị agịga nke ammeter na-apụ apụ na-egosi ọnụnọ na sekit ikuku nke ugbu a na-akpọ induced current nke na-egosi na usoro a (coil + magnet) na-eme ka onye na-emepụta ọkụ eletrik, voltaji electromotive. na-apụta a na-akpọ voltaji na-ebute ọkụ eletrik.
May 21, 2022 by admin Igbo 0